Mari0, Mario dombo rakashongedzwa nechakakosha chePortal | Linux Vakapindwa muropa
Simudza ruoko rwako kana iwe usingazive Mario. Plumber yaNintendo yakave nemukurumbira muma80s uye akazviita mumutambo uyo nhasi, uchienzaniswa nezviripo, zvinoita kunge zvisina musoro. Yaive 2D 8-bit papuratifomu mutambo umo Mario aifanira kununura muchindakadzi uyo… akange asina kumbobvira ave munhare yaaifanira kunge ari. Iyo yaungave usinga zive ndeye Portal, zita razvino rakawanda uye rine zvirinani mifananidzo. Asi mune ino positi hatisi kuzotaura nezve imwe kana imwe, kana zvisiri zve Mari0.
Sei ndiri kutaura mitambo miviri kana ndisiri kuzotaura nezvayo? Zvakanaka, nekuti Mari0 inenge iri a kuronda kwaMario kwavakawedzera chinhu chakakosha kwazvo chePortal. Izvo hazvitore hunyanzvi kuti ufungidzire kuti wakanyanya kukosha wemutambo une zita rechipiri une chekuita nema portals. Uye ndizvo zvavakawedzera kuna Mario kuti vagadzire Mari0. Sezvauchaona muvhidhiyo (usandishoropodza zvakanyanya) pakutanga zvinombo vhiringidza, kunyanya kana ukatanga kutamba usina kana kuziva madhiri.
Mari0 keyboard inodzora
Chinhu chakanakisa, semumwe mutambo, kushandisa controller. Analog chaiyo inofanirwa kudzora tarisiro yepistori, iri nyore kwazvo pane iyo keyboard. Nekhibhodi tichadzora Mario seinotevera:
Kupfura / Kumhanya: Kuruboshwe kuruboshwe.
Salto: Space bhaa.
Chinangwa chePortal Gun: Fambisa mbeva.
Akapfura kubva pamusuwo wepasuo: Kuruboshwe tinya.
Portal yekubuda kupfura: Kurudyi tinya.
Ndakayedza kuti igovane newe iwe usiri nyanzvi yaMario, kure nazvo. Iwe unogona kuita zvinoyevedza zvinhu, sezvaungaona semuenzaniso mu iyi imwe vhidhiyo. Pane zvirinani, ndinofunga zvakakosha kuedza, uye kune izvi zvakaringana izvo ngatiisei yako snap package nemirairo inotevera:
Iwe unofungei nezvaMari0?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Mari0, Mario dombo rakashongedzwa nechakakosha chePortal
Mitemo isina musoro yeiyo software yenyika